Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iindlela zoKhuseleko zongeza kwiqela lolawulo
I-SecurityTrails, i-Inventory ye-Intanethi ye-Intanethi, yongeza kwiqela layo elilawulayo ngokuzisa uScott Donnelly njengo-Vice Mongameli weNtengiso kunye no-Taylor Dondich njengeGosa eliPhezulu leTekhnoloji. Amalungu eqela elide i-Courtney Couch kunye noKris Lopez bathatha iindima ezintsha zokujikeleza iqela.
“UTylor noScott bajoyina ngexesha elifanelekileyo leSecurityTrails. Ngokuphehlelelwa kwemveliso yethu yokuNcitshiswa koMphezulu woHlaselo, sithatha imiceli mngeni emikhulu kwimibutho emikhulu. Amava abo aya kunceda ekuqinisekiseni ukuba zombini iSecurityTrails kunye nabathengi bayo baphumelele. ” – UChris Ueland, iCEO yeSecurityTrails.
UScott Donnelly uzisa ubutyebi bolwazi lweshishini, ebambe iindima zobunkokeli kwintengiso ephezulu kuzo zombini i-Expanse kunye nekamva elirekhodiweyo. Ngexesha lakhe njengoSekela Mongameli weZisombululo zobuGcisa kwiRecord Future, uScott waqhuba ukuhlanganiswa kobukrelekrele babo bokhuseleko kunye neninzi ye-IT ehamba phambili kunye neemveliso zokhuseleko. Ukufika kwakhe kwi-SecurityTrails kuya kuqinisekisa ukuba abathengi bayaliqonda ixabiso le-Inventory ye-Intanethi epheleleyo kuwo wonke umbutho wabo.
UTaylor Dondich uthatha indawo njengeGosa elitsha lobuGcisa lobuGcisa. U-Co-Founder Courtney Couch ngoku uya kugxininisa ekufumaneni iindlela ezingcono zokuchonga iziseko zoncedo zabathengi kunye nemingcipheko kwindima yakhe entsha njengeGosa eliyiNtloko le-Innovation.
UDondich usebenze kwindawo yetekhnoloji iminyaka engaphezu kwamashumi amabini kunye neenkampani ezifana neYahoo kunye neSplunk, kunye neVP yobuNjineli beMaxCDN. Amava akhe kwiindima zesigqeba sobuchwephesha, umcebisi kunye nenjineli iya kukhokela iSecurityTrails ukuphuhlisa itekhnoloji entsha kunye nokuqinisekisa ukuba abathengi abaze bavalwe amehlo yimingcipheko engaziwayo.
Wayekhe wasebenza ngaphambili njengoMphathi weQhinga leNtsebenziswano kwi-SecurityTrails, imvelaphi yeshishini elibanzi likaKris Lopez kunye nezakhono zakhe ezibalaseleyo zokusebenzelana nabantu kunye nezakhono zolawulo lweprojekthi zimenza ukuba abe lukhetho olugqibeleleyo njengeNtloko entsha yaBasebenzi.
I-SecurityTrails izisa olu tshintsho lwezixhobo ukubaqhubela kwinqanaba elilandelayo kunye nokuqinisekisa ukuba bayaqhubeka nokubonelela ngeyona datha ilungileyo ekhoyo ukunceda iinkampani ukuba zizikhusele.